Goobaha Kubada Cagta ee Slotka Online - Codes-ka Online Casino Bonus
Casino Online Xeerarka Bonus > Goobaha Isboortiga ee Slotiyanka Online
(243 votes, celcelis ahaan, 5.00 out of 5)
Loading ... Laga bilaabo Jannaayo 2017, suuqa khamaarka ee ku yaala Slovenia waa mid ka mid ah kuwa ugu horumaray ee ka soo jeeda waddamada weligood ka mid ah Yugoslavia. Iyadoo la raacayo shuruucda khamaarka, ilaa iyo inta badeecadaha iyo bakhtiyaanasiibka aysan haysan qaybin xooggan oo ku yaala Slovenia, guryaha qamaarka ayaa ku yaal dalka oo dhan: laga bilaabo casinos raaxo ah oo ku wareegsan xuduudaha ilaa goobaha dalxiiska.
Khamaarista Online ee dalka Slovenia
Laga bilaabo Janaayo 2017 khamaar online ah oo ku yaala Slovenia waxaa badanaa ka kooban bakhtiyaanasiibka qaranka Slovenia. Waxaa sidoo kale jira Esteve oo ka shaqeysa jihada bakhtiyaa nasiibka isboortiga ee Slovenia. Nidaamka sahayda labadaba waxa loola jeedaa soo jiidashada ciyaartoyda gudaha, laakiin helitaanka goobaha shisheeye ee casino online waxay sidoo kale ku jirtaa xayndaabka dadweynaha iyada oo aan wax xaddidaad ah la taaban karin. Si kastaba ha noqotee, waxaynu ku qoraynaa liiskayaga khamaarka internetka, taas oo ay u badan tahay, xaaladdan si dhakhso ah ayaa isbeddeleysa.
Boggaga internetka ee casino ayaa aqbalaya ciyaartoy ka socota Slovenia
Waxaad eegtaa liiska goobaha qadka casriga ah ee aqbalaya ciyaartoy ka socota Slovenia, oo bixiya cayaaro tayo sare leh oo ammaan ah. Halkan waxaad ka heli doontaa waxyaabo badan oo madadaalo ah oo ka imanaya mashiinnada moobiilka si loo ciyaaro casriyeynta oo ka soo jeeda kuwa sida caanka ah ee caanka ah sida NetEnt, Merkur, IGT, Novolin, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, iyo kuwo kale oo badan. Waxaad sidoo kale akhrin kartaa boggayaga internetka ee khadka casriga ah, si aad u ogaatid kor u qaadida internetka, gunooyinka iyo fursadaha lacag bixinta ee laga heli karo ciyaartoy ka socota Slovenia.
Khamaarista dalka Slovenia
Slovenia - waa waddan yar oo kala bar ah gobolka mooska, laakiin ku yaal meel aad u wanaagsan. Halkan waxaad ku raaxeysan kartaa quruxda Alps, dabeecada cajiibka ah ee kaymaha iyo xeebaha Badda Adriatic. Laakiin dadka khamaaraya waxay leeyihiin wax ka qabashada geeska Europe, sababtoo ah in badan oo casinos ee Slovenia.
Slovenia - waxoogaa joqraafi iyo taariikh. Xaalad gaar ah tan iyo 1991;
Khamaarista dalka Slovenia:
casinos dhulka ku salaysan;
Casinos Online waa la oggol yahay, waa inuu haystaa liisanka gobolka.
Shan goobood oo Ljubljana - caasimada Slovenia, cinwaanada;
Goobta Slovenia iyo asalka taariikheed ee kooban
Jamhuuriyadda Slovenia waxay ku taala bartamaha Europe. Saaxiibada wadankan yari waa Italy , Austria , Hungary iyo Croatia. Caasimaddu waa magac aad u sarraysa - Ljubljana.
Goobta Jamhuuriyadda waa mid gaar ah. Meel yar oo aad u tagto, waxaad ku socon kartaa skiing, oo kaliya ku wareersan adigoo maraya duufaanta muuqata ee alpinka ku dhaadhaca webiyada duurjoogta ah, si ay u socdaan safarro godad badan oo ay ku raaxaystaan ​​biyaha, waxay u safrayaan xeebta Badda Adriatic, ama ka fariistaan ​​aamuska oo ah kaynta bikradaha ah ee cufan. Waxaa jira hudheello badan oo ku yaal jihooyin aad u kala duwan, iyo horumar weyn oo ku saabsan khamaarka.
Taariikhda Slovenia waa mid wakhti dheer oo aad u daacad ah, dhab ahaantii gobolka waxaa la sameeyay kaliya 1991 waxaana lagu aqoonsaday 1992. Si kastaba ha noqotee, dadku waxay degganaayeen aag intaa ka hor inta aaney dhicin. Maanta gobolka ayaa leh tiro dad ah oo kaliya 2 milyan qof. Foomka dawladda - Jamhuuriyadda barlamaanka, madaxweynaha waa madaxweynaha, maanta Borut Pahzor. Doorka muhiimka ah ee uu ka ciyaaro Ra'iisal Wasaaraha, ayaa hadda haysta miroslav Tserar.
Slovenia waa EU, sidaas lacagta lacagta rasmiga ah waa Euro. Dhulku wuxuu u qaybsan yahay 210 iyo magaalooyinka 11.
Casinos iyo khamaarista Slovenia
Khamaarista Slovenia waa la ogol yahay, waxaana casinos ku yaal dhowr magaalo: Lipica, Portorož, Nova Gorica, Kranjska Gora. Ka sokow dadka maxalliga ah ayaa si khaas ah u yimaada si ay u ciyaaraan muwaadiniinta dalalka deriska ah - Austria iyo Talyaaniga. Dabcan, khamaarista - mid ka mid ah meelaha soo jiidashada dalxiiska ugu caansan.
Tilmaamaha casriga ah ee Slovenia ayaa ah inaanay suurtagal ahayn in ay ku ciyaaraan qadarka weyn iyo 100-200 euros. Laakiin martida marwalba way badan yihiin. Haddii aad rabto inaad u ciyaarto dherer sare, waa lagama maarmaan inaad u sheegto shaqaalaha khamaarka guriga, markaa waxaa lagugu martiqaadi doonaa qolal gaar ah oo VIP ah.
Goobta ugu horeysa ee loogu talagalay khamaarka waa Nova Gorica, casino halkan xitaa qabanqaabiya tours. Magaaladan waxaa ku yaal 2 ee casiniyada ugu wayn ee Slovenia: Perla Casino & Hotel, Park Casino & Hotel. Sidee ugu casinos adduunka ugu fiican, gudaha jilicsan ee halkan, shaqaale aan rasmi ahayn, daraasiin badan oo kala duwan oo kaararka kala duwan, roulette , mashiinnada kabaha.
Xarunta kale ee waxqabadka khamaarka waa Kranjska Hill. Waxaa sidoo kale jira casinos 2 caanka ah: Korona, Casino & Hotel Kranjska Gora. Waxay bixisaa wax aan ka yarayn casino ee Nova Gorica.
Dayactirka ee Portorož ayaa sidoo kale isku daaweyn kara ciyaarta kaararka, mashiinka xargaha ama roulette, magaaladu waxay leedahay casinos 2: Casino Portorož, Grand Casinò Portoroz. Lipica, martida ma tagi doono iyada oo aan qamaarin qamaar, si fudud booqo Grand Casinò Lipica.
Dabcan, dadka soo booqanaya waxay ku raaxaysan karaan maahan oo kaliya ciyaarta, laakiin sidoo kale noocyo badan oo cabitaano fudud ah. Badiyaa barnaamijka bandhigga ee casino, sidaa daraadeed qofka la socda, oo aan dooneynin inuu ciyaaro, sidoo kale wuxuu noqon doonaa wax uu sameeyo.
In Slovenia si weyn u casriyeyn martida, sidaas daraadeed ayaa si joogto ah loo cusbooneysiiyo. Taageerada ciyaaraha kubada cagta ayaa ku farxi doona kala duwanaanshahooda, waxay ku xiran yihiin a blackjack iyo poker, kan dambe wuxuu matalaa noocyo kala duwan: ootis poker, Texas Hold'em, 7 Card Stud Poker, Poker Caribbean, iyo xataa Badugi. Taageerayaasha Punto Banco sidoo kale ma aha in laga xumaado. U hubso inaad ka shaqeyso hoolalka roulette, sida caadiga ah Faransiis.
Sida wadamada EU-da, khadadka shaqada ee ay dowladu maamusho. Haddii ay hay'addu ku shaqeyso xeerka labiska iyo xadka da'da, waxaa lagu dhiirigelinayaa inay wax bartaan intaan la codsan booqashada.
Kulannada internetka ee Slovenia
Slovenia - waddanka casriga ah, sidaas darteed halkan waxaa lagu ciyaaraa kaliya casino dhab ah, laakiin sidoo kale waa dhageeysan. 2014, sharci cusub, oo xukuma dhaqdhaqaaqayaasha, waxay soo bandhigeen qalab gaar ah, kaas oo si toos ah hoos yimaada Wasaaradda Maaliyadda.
Ku shaqeynta khadka internetka waa la isku halleyn karaa, tan iyo bilowgii shaqada waxaa looga baahan yahay inay helaan liisanka sanadaha 5. Iyo si ay u gudbaan imtixaanka, waxay fiiriyaan liiska cajiibka ah ee shuruudaha khasabka ah. Sidaa darteed, amniga iyo ka bixitaanka lacagta ma walwalayaan. Wixii ugu weyn ee uu walaac ka yahay Casino Casino, Royal Panda Casino, Dhamaan Barta Casriga, Betvictor Casino, Betway Casino iyo kuwo kale oo badan.
Bridge Triple. Cinwaanka: Tromostovje, Ljubljana. Ururkan quruxda badan, oo ka mid ah qalabka qaran, wuxuu ka kooban yahay buundooyinka lugta leh ee 3, oo lagu tuuray webiga Ljubljica. U dhex maro buundada waxay ku jiri kartaa qaybta hore ee magaalada, oo lagu xiray gaadiidka.
Tivoli Park. Cinwaanka: Tivoli Park, Ljubljana. Waa beerta weyn ee caasimadda, oo ku baahsan waqooyi-galbeed oo ka mid ah xarunta taariikhiga ah. On territory of 500 hektar oo ku yaala meel si toos ah loogu tago Tivoli oo ku yaal xadiiqad, bambooyin, jardiinooyin, beeraha, iyo buurta Rožnik Cone.
Cathedral of St. Nicholas. Cinwaanka: Dolničarjeva ulica, 1, Ljubljana. Cathedral of Archdiocese of Ljubljana, lagu dhisay sharaf leh Nicholas of Myra. Dhismaha dhismo qaran ayaa bilaabmay 1361 waana la dhammeystirey oo keliya qarnigii XVIII.
Sawirka Qaranka ee Slovenia. Cinwaanka: Puharjeva ulica 9 1000 Ljubljana. Tani waa matxafka farshaxanka ee ugu muhiimsan ee Slovenia, oo lagu aasaasay 1918. Halkan waxa lagu soo ururiyey sawirro qurux badan oo ka mid ah sawirrada laga bilaabo qarniyadii dhexe.
Matxafka Qaranka ee Slovenia. Ciwaanka: Prešernova cesta 20, 1000 Ljubljana. Matxafkani ugu da'da weyn dalka ayaa soo ururiyay waxyaabo badan oo qadiimi ah, muuqaalo farshaxan oo farshaxan, daabacado, sawiro, shinni.
Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Slovenia iyo Slovianees
Slovenian - luqada yurubta ah, weli waxay haysaa lambarka labada.
Dadka reer Sloveniya ayaa si degdeg ah u kaca oo u seexanaya waqti hore, ka dib saacadaha 22, waddanku horay ayuu u nasanayaa.
Ljubljana, waxay ku nool yihiin 13% dadka.
Qeyb ka mid ah dhulka - kaynta, iyo saddex meelood laba meel - kaydka.
Slovenia waa godka ugu badan ee lagu soo booqdo Yurub - Postojna, qayb ka mid ah jaangooyooyinka loogu talagalay maxbuuska Ruushka ee dagaalka.
In Lipica oo leh 1580 waxay wadataa beer beer ah, kaas oo kobciya lipitsianov - fardaha naadir ah, waxay bixiyeen maxkamadaha boqortooyada ee Europe.
Slovenia - mid ka mid ah dalalka ugu dhaqsiyaha badan ee ka jira Yurub, waxaa jira Horumarka Horumarka Aadanaha oo aad u sarreeya - 0.892, oo si joogto ah u koraya.
Slovenia khariidada Yurub
0.1 Khamaarista Online ee dalka Slovenia
0.2 List of Online Sites Casino Top 10 Australia
2.1 Boggaga internetka ee casino ayaa aqbalaya ciyaartoy ka socota Slovenia
3 Khamaarista dalka Slovenia
3.0.1 Goobta Slovenia iyo asalka taariikheed ee kooban
3.1 Casinos iyo khamaarista Slovenia
3.2 Kulannada internetka ee Slovenia
3.2.1 xeebaha Ljubljana
3.2.2 Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Slovenia iyo Slovianees
3.2.3 Slovenia khariidada Yurub